समय र परिवेश: जापानमा हिउँ अनुभव
Posted by Dhruba Panthi at 8:35 PM
Ashesh January 25, 2010 at 8:46 AM
नेपालमा हुँदा कमसेकम दामन पुगेरै भए नि हिऊँ देख्नु भएको रहेछ तपाईँले । मैले त त्यति नि देखेको छैन अझैसम्म । लौन के गर्ने होला!!
वर्णन गरिएका दृश्यहरू,पलहरू अनि ति रमाईला अनुभवहरू साँच्चिकै रमाईला र अनौठा लागे मलाई पनि । विचरा केहि नदेखेको यो ववुरोलाई अचम्म लाग्नु नि स्वभाविकै हो । अनि अलि होस पुर्याएर चिप्लेटीँ खेल्नुहोला है । परदेशमा एकातिर जिउ सड्क्यो भने त गाह्रो पर्ला नि फेरि!!!
समग्रमा मीठो यात्रा वर्णन ।
HAWA January 25, 2010 at 10:42 PM
लु हेर यो ध्रुब जी ले पनि मैले भन्दा पहिले नै हिउमा खेल्नुभएछ..तर गर्लफ्रेन्ड चाही धुर्ब जी को पनि रैनछ ..अलि संतोष भो
अशेष जी, हामि पनि लाग्ने हो कि कालापथर तिर ?
माकुने ले समेत चालेंज दिसक्यो
Dilip Acharya January 26, 2010 at 4:17 AM
मेरो आफ्नो अनुभवमा पनि यात्रा 'गर्दा' भन्दा 'सम्झदाँ' र पढदा रमाइलो हुने गर्छ । स्केटीङ आदि नजाने पनि हिउँसंग खेल्न मलाई पनि रमाईलै लाग्छ ।
Basanta January 27, 2010 at 7:31 AM
लौ रमाईलो गर्नुभएछ! आफूले भने पहिला चीनमा बस्दा एक-दुई पटक खेलेपनि जापान आएपछि मौका मिल्या छैन।
Dhruba Panthi January 30, 2010 at 7:24 AM
प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहुने सबैमा आभार प्रकट गर्दछु।
हावाजीले गर्लफ्रेन्डको कुरा झिकेर मर्मै पर्ने ठाउँमा हिर्काउनुभयो ;) अनि अशेषजी, हावाजीसँगै हिउँ हेर्न कस्सिनुभए हुन्छ तपाईं पनि। तर माकुनेले च्यालेन्ज दिए भनेर एकैचोटि कालापत्थरै पुग्न खोज्दा चाहिँ कुजाता दिज्यूको हाल होला नि फेरी हावाजीलाई हावा (अक्सिजन) नपुगेर... हे हे
HAWA February 1, 2010 at 9:31 PM
डोन्ट वरी धुर्ब ब्रो, सुजाता भन्दा पनि सुजाताको बाउ बाट प्रभावित छु... अक्सिजन सिलिन्डर नै बोकेर गइन्छ हा हा हा
हिमाल पर्बतको देशबासी भए पनि ... नेपाली लाई हिउँ भन्दा... अचाक्ली हुन्छ..
जे होस्र माईलो अनुभब गर्नु भएछ ... मैले चाहिं त्यति मज्जाको हिउँ खेल्ने मौका पाएको छैन....पुरानो ठाउँमा एक पटक चैं घरभित्र लुक्नै पर्ने गरि हिउँ परेको थियो...खेल्ने चान्स नै भएन